काेभिड १९ : विश्वभर खोपको स्थिति कस्तो ? (भिडियाे रिपाेर्ट)
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस बिरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण कार्य विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको छ । हाल विश्वभर २ सय १२ वटा भ्याक्सिनहरुको निर्माण कार्य भइरहेको छ । डब्लूएचओ भ्याक्सिन ल्यान्डस्केपका अनुसार, प्रि-क्लिनिकल परीक्षणहरुमा १ सय ६३ वटा भ्याक्सिनहरु रहेका छन् ।
यी भ्याक्सिनहरुको हाल प्रयोगशालामा मात्र परीक्षण भइरहेको छ । यस्तै एकैसाथ ५३ वटा भ्याक्सिनहरु क्लिनिकल परीक्षणमा छन् । जसमा पहिलो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा २३ वटा, दोस्रोचरणको क्लिनिकल परीक्षणमा १६ वटा र तेस्रोचरणको क्लिनिकल परीक्षणमा ७ वटा भ्याक्सिनमा काम भइरहेको छ भने ७ वटा भ्याक्सिनले भने आपतकालीन स्वीकृति पाइसकेका छन् ।
सामान्यतया क्लिनिकल परीक्षणमा धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । तर केही देशहरुले कोरोनालाई आपतकालिन रुपमा विचार गर्दै आफ्नो भ्याक्सिनलाई आपतकालीन स्वीकृति दिएका छन् । जसमा चीनमा ४, रसियामा २ र बेलायतमा १ वटा भ्याक्सिनलाई आपतकालिन स्वीकृति दिइएको छ । बेलायतपछि अमेरिका, बहराइन, यूएई र क्यानडाले पनि फाइजरले निर्माण गरेको भ्याक्सिनलाई आपतकालीन स्वीकृति दिएको छ ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ १७:४५ सोमबार
बेलायत र अमेरिकासहित ५ देशहरुमा फाइजरको भ्याक्सिन अनुमोदन, विश्वभर खोपको स्थिति कस्तो ?
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति साढे ३६ अर्ब बचतमा